တောင်ရေးမြောက်ရေး: PPT ပညာတန်ဆောင်
Posted by ဘာတွေတုန်း at 4:21 AM
ဖေ့ဘွတ်မှာ ဓာတ်ပုံတွေ တွေ့ကတည်းက စိတ်ဝင်စားနေတာ....
it's nice to read ur experiences..i looked through all the pics in all the albums on facebook and really happy for u all & the children there..make me want to go back...
ပညာဒါန ဆိုတာ မွန်မြတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် မလုပ်နိုင်လို့ ညီမတို့လို လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ပဲ ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
အားပေးတဲ့ မမနွေးကော သက်သက်ကော ကိုဇက်တီကော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် =)
I hope you will have enough time to write more entries here. Seems like NUS is depriving you of your time to write!
Btw, I like PPT too ;)
ဖတ်သွား၏. တို့လဲညံ့သည်. အားကြီးညံ့သည်.အားငယ်ရသည် မကြာခဏ.
ကလေးတွေ ကို သွားချွတ်ခိုင်းသူကြီး..ရှိတာအကုန်ချွတ်...........ဟာသဘဲ.